Jiri Ọrụ My Google rụọ ọrụ gị niile dị n'ịntanetị Gam akporosis
Google na-ebupụta Ọrụ m ka ị mara ihe niile ị na-eme site na akaụntụ gị
Google maara nke ọma maka mara ma nakọta nnukwu ego nke ozi ị nyere site na akaụntụ Google gị mgbe ị na-eji ngwaọrụ gị ma ọ bụ kọmputa ọ bụla. Ebe ọ bụ ikike ị mara ụdị data ọ na-achịkọta kwa ụbọchị, ọ bidola web peeji ebe ị nwere ike ịchọta ozi niile ọ ma banyere gị.
Ugbu a ọ webatara Ọrụ m, ngwa ọrụ nke ụlọ ọrụ na-enye nkọwa ndị ọzọ gbasara ya ihe niile dị na ntanetị na ị na-eme kwa ụbọchị. Site na oghere a, ị nwere ike ijikwa ole na ụdị ọrụ ị na-arụ n'ịntanetị mgbe ị nwetara akaụntụ Google gị. Weebụsaịtị ahụ na-arụ ọrụ maka nsụgharị mkpanaka na desktọọpụ na ngosipụta mgbasa ozi, Android, akwụkwọ, Chrome, ndị mmepe, ego, enyemaka, nyocha ihe oyiyi, eserese, Google Ugbu a, Google Play, ọchụchọ, ịzụ ahịa, vidiyo vidiyo na Youtube.
Ihe omuma a nile nke edoziri ka i wee mara ihe ndekọ data niile nke Google na-eme, ma e wezụga inwe ike imenye gị ụjọ site na njikwa nke Mountain View na-eme n'elu gị, na-enye gị ohere ịhụlee ihe ochie ma wepu ndenye a kapịrị ọnụ. Ngwá ọrụ ọchụchọ na-enye ndị ọrụ ohere ịchọ ụbọchị na site na ngwaahịa Google ka ọ dịrị mfe ịkọwapụta ozi ịchọrọ ka egosiri gị oge niile, ebe ọ bụ nnukwu ego o nwere ma ọ bụrụ na ịmalite ịlaghachi na ya. .
Site n'otu ibe ị nwere ike ịnweta akaụntụ m iji jikwaa nzuzo na nche. I nwekwara ike nyochaa ihe omume Google ndị ọzọ site na menu hamburger na aka ekpe aka ekpe.
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na kemgbe Ihe omume m ị nwere ike hazie mgbasa ozi na ịchọrọ ịpụta na Ad Sense, yabụ ị nwere ike ịhọrọ n'etiti otu dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na-ebupụta Ọrụ m ka ị mara ihe niile ị na-eme site na akaụntụ gị
Google enyela gị ohere ikpebi ụdị mgbasa ozi ịchọrọ ịhụ
15 egwuregwu kacha mma gam akporo vidiyo nke 2016